METALLIC BEGONIA: SHARAXAADDA DHIRTA IYO SAWIR UBAX AH, QAABABKA BEERITAANKA IYO DARYEELIDDA GURYAHA, SIDOO KALE TALOOYIN KU SAABSAN LA DAGAALLANKA CUDURRADA IYO CAYAYAANKA - GURI, GURI
Qurxinta gudahaaga waa astaamaha birta. Waan helnaa xayeysiis guri
Iskoolka Metallic (Telesnootnaya ama Metallic) waa wakiil ka mid ah nooc qurxinta iyo caleenta caleenta. Dhaqanka waa mid aan qabyo ahayn, uma baahna iftiin badan.
Si dhirta loo noqdo quruxda dhabta ah ee gudaha iyo in lagu raali galo ubax, waa in si habboon loo ilaaliyaa, laga ilaaliyo cudurrada iyo cayayaanka.
Dheeraad ah ayaan si faahfaahsan u sheegi doonnaa dhirtaas: waxa ay u eg tahay, waa maxay sifooyinkaa. Fikrad faahfaahsan oo ku saabsan beeritaanka, taranka iyo daryeelka.
Qeexitaanka Botanical iyo asalkiisa
Bilowga Metallic (Begonia Metallica) waxay magaceeda u bixisay midabkeedii midabkiisu yahay caleemaha: dhinaca dhinaca dambe waxay u eg yihiin guduud, iyo midabka hore ee cagaarka ah. Lakabyo cas oo leh shinni ah shinni. Dhaqanku wuxuu ku koraa mid aad u ballaaran. Baaxaddiisu badanaa waxay gaadho 1 mitir. Caleemaha waa weyn, 15 cm dhererka. Stem pubescent iyo branching.
Bilowga Tacliinta ee Telescolor oo asal ahaan ka yimid Brazil. Habitat - buuraha qoyan, mugdiga ah ee geedaha iyo kaymaha qallafsan ee sarreeya oo ah 800-1700 mitir ka sarreysa heerka badda.
Muuqaal, muuqaal iyo sawirro ubax ah
Caleemaha curonia ee birta waa muddo dheer, asymmetrical, oval leh geeso jugged. Saxanka caleenta ah.
ubaxyo cufan oo midab leh oo casaan leh;
on cawska waxaa jira dheddig haweenka iyo labka ah;
sii kordhaya sanadka oo dhan; muddooyin firfircoon: guga iyo xagaaga;
Miro waa sanduuq saddex xagal ah oo ka sameysan korka dhirta ubaxa dumarka.
Ubax oo metonia si weyn u. Sababtoo ah cabirkeeda weyn waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo qol, aqallada dhirta lagu koriyo, keligood ama si wadajir ah ula socda noocyo kale oo begonias ah.
Waxaanu bixinaa si aan u barano noocyada kale ee begonias. Ma ahan kuwo qurux badan oo aad u caan ah beeralayda ubaxa. Akhri noocyadaas: Royal ama Rex (oo ay ku jiraan dhalashada iyo daryeelka ee warshadan), Griffith, Griffin, Borschevikolistnaya iyo Imperial.
Nalalka iyo meesha.
Dhaqanka ayaa doorbidaya iftiiminta iftiinka iyo hooska qayb ahaan, wuxuu u dulqaadanayaa diidmada. Caleemaha ayaa aad u nuglaanaya qorraxda tooska ah - gubashadu waxay u muuqataa iyaga. Joog la'aanta waxay yareyn doontaa isbeddelka caleenta iyo si xun u saameynaya horumarinta ubaxa.
Waa muhiim! Cabbirta birta ma u dulqaadanayso qoyaan badan iyo farsamo.
Baloteli u koraya ubax ma aha mid ku habboon, sababtoo ah ma u dulqaadan dhibcood heerkulka xoog leh. Qolalka reer galbeed, bariga ama waqooyiga qolka ayaa noqon doona meesha ugu fiican ee lagu hayo.
Begonias waxaa lagu beeray nafaqo, dabacsan oo dabiici ah. Si aad u diyaarsato substrate tayo leh, isku dhafan marka la barbardhigo:
Wixii beerto dhirta dhalinyaradu waxay isticmaalaan carrada jilicsan: isku dhafan isku dhoobo, carrada caleen iyo peat.
Qodobada soo degaya.
Begonias Deciduous waxaa la beeray guga hore, marka uu bilaabo inuu koro. Dheriga waxa loo doortay qoto dheer oo ballaaran, oo la doorbidayo caag. Laga soo bilaabo waxa ay fududahay in la soo saaro dhirta inta lagu guda jiro isu tallaalidda. Si loo hubiyo helitaanka hawada ee xididada iyo soo bixitaanka biyaha xad-dhaafka ah, godadka dheecaanka waxaa lagu sameeyaa taangiga.
Dheecaanku waa in la dhigaa xagga hoose: dhagaxyada yaryar ama dhoobo dhoobo. Ubaxa wuxuu ka baabi'in karaa qoyaan xad dhaaf ah.
Daaqsiinta waxaa la dhigayaa dheriga oo lagu rusheeyey carrada la kariyey.
Sidee loo daryeelaa guri guri?
Heerkulka iyo qoyaanka.
Begonia metallic ma u dulqaadan dhibco fiiqan. Heerkulka ugu fiicani wuxuu ka yimid +16 ilaa 25 darajo. Xilliga jiilaalka, ugu yaraan + 15-16 digrii. Dhaqanku wuxuu jecel yahay qoyaan badan, laakiin uma dulqaadan karo qoyaanka caleemaha. Si loo hubiyo heerka loo baahan yahay qoyaanka, ubaxa waxaa la dhigayaa baalal qallayl oo qoyan ama dhoobo ballaariyey.
Wixii soo kordhay ee telescolour ma aha qoyaan la joogteeyo. Nidaamka asaasiga ah wuxuu bilaabi doonaa inuu isku mariyo. Qalajinta dhulka sidoo kale lama aqbalo.
Qoyaan iyo nidaam dhexdhexaad ah sida ciidda u engegan. Marka uu dhoobo 1.5 cm - dhirta u baahan tahay qoyaan.
Isticmaal biyo diirimaad leh oo jilicsan, oo horey loo kariyey, oo la dejiyey.
Biyaha waxaa lagu yareyn karaa acid.
Dayrta iyo guga si loo yareeyo qoyaanka.
Dareen u yeelo! Lama isticmaali karo waraabinta biyaha qabow ee tuubada.
Haddii xilliga qaboobaha aysan suurtagal ahayn in heerkulka qolka kor ku dhaafo +15 digrii, ubaxa waxaa lagu waraabiyaa biyo diirran oo waxaa intaa dheer lagu rakibay biyo diirran oo u dhaw saxanka. Lakabka ugu sareeya ee dhulka ayaa ka furmay 1 cm.
Bacriminta qudaarta leh xeryahooda dabiiciga ah iyo macdanta, iyaga oo labadii toddobaadba marba ku beddelma. Waxaad ka iibsan kartaa bacriminta guud ee dhirta caleenta geedo ama khaas ahaan loogu talagalay begonias.
Waxyaabaha ku saabsan daryeelka.
Sanadkiiba hal mar guga dhaqanka qallafsan ayaa lagu beddelaa dherer wayn. Dheriga yar, begoniasyada birta waxay bilaabaan inay jilcaan. Qalitaanka ka dib, manjooyin ayaa la sameeyaa. Old iyo mudo gaaban gooyaa, ka tago jir yar. Leaves iyo gooyn loo oggol yahay in xididka.
Dhibaatooyinka koritaanka iyo cudurrada
Sababta oo aan u hoggaansanayn xeerarka daryeelka dhirta ayaa jiran kara. Natiijada khadadka xad-dhaafka ah iyo heerkul aad u sareeya qolka ku yaala gabadha ayaa bilaabmeysa in ay xoqdo asliga ah saldhigga, caleemaha ayaa hoos u dhacaya. Si aad uga takhalusto dhibaatada, waraabinta dhererka iyo qaadashada dheriga dhirta meel qabow.
Haddii biyuhu hoos u dhacaan si khiyaano ah caleemaha, oo ay qorraxdu si toos ah u socoto, gubashadu waxay ku dhacdaa taarikada caleenta. Ubaxa waxaa isla markiiba laga saarayaa aagga hareereysan. Marka hawadu aad u qallalan tahay, cidhbaha caleemaha way engegaan oo waxay soo noqdaan bunni. Iyada oo aan iftiin lahayn, go'yaalku wuxuu noqonayaa mid cirro leh, gacmeedna, ciriiri ah.
Cudurka birta wuxuu saameynayaa cuduro kala duwan:
Fungus Duufaan naxaas ah ayaa ka muuqata asliga ah, caleemaha iyo ubax sababtoo ah qoyaanka hawada oo kordhay. Daaweyn: kor u qaad hawo qaboojiyaha qolka, ka fogow qoraalada. Warshad waxaa lagu daaweeyaa fungicide.
Macmacaanka macaanka. Leaves waxaa lagu daboolay ubaxyada ubaxyada, ubaxay oo u dhintay. Cudurku wuxuu keenaa qoyaan kordhay heerkul ah 20-24 digrii. Si loo daaweeyo begonia, waxaa loo oggol yahay in la qalajiyo, lagu wanaajiyo wareegga hawada oo lagu daboolo fungicides.
Caabuqa fayraska. Dhibco cad ayaa ku muuqda xaashida. Cudurka laguma daaweeyo. Warshad waa in la burburiyaa si looga ilaaliyo ubaxyada kale ee infekshanka.
Qoraalka. Begonia waa in aan lagu meeleyn jikada meel u dhow mashiinka gaaska. Waa mid aad u xasaasi u ah badeecooyinka dabaysha gaaska. Sidaa darted, dhirtu waxay noqotaa ciriiri iyo dhoobo.
Dhaqanka geedaha ayaa dib loo soo celin doonaa haddii la siiyo xaalado ku haboon oo lagu hayo: ku rid meel wanaagsan oo iftiin leh, hoos u dhig biyaha. Haddii xilliga qaboobaha caleemaha ay noqdaan kuwo la yiraahdo, waxaa loola jeedaa in ay jiraan qabyaal qolka ama ma aha mid diirran. Warshadda waxaa loo wareejiyaa meel diiran.
Xilliga xagaaga ee bilowga ah waxay weerari kartaa aphid. Caleemuhu waxay isu beddelaan huruud, leex, iyo dhicid iyo burooyinkeeda. Si loola dagaallamo cayayaanka, dhirta waxaa lagu buufinayaa Actancy iyo Fufanon.
Under xaaladaha qoyaan sare, aqalka dhirta cagaaran ayaa soo baxday. Calaamadaha: caleemaha waa la jeexay waxayna bilaabeen inay qalalaan. Si aad uga takhalusto cayayaanka adigoo isticmaalaya saabuun.
Waraabin aad u badan oo ku saabsan xaalad aad u kulul waxay dhalinaysaa cayayaanka caarada. Midabada marble ee caleemaha, huruudka iyo muuqaalka kalluunka ayaa markhaati u ah guuldarada. Decision-ka daawada ayaa caawin doonta xallinta dhibaatada.
Dhallaanka birta waxaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan: gooyn, caleemo (qaybo caleemo), abuur iyo kala qaybinta duurka.
Laga soo bilaabo afkoda gooyaa caleemaha 8-10 cm dhererka.
Biyo ku jirta biyaha.
Marka xididdada ka muuqdaan, wax beerto waxaa la dhigayaa dheri leh substrate ah.
Markabka waxaa lagu daboolay caag balaastig ah.
Marka caleemaha ay muuqdaan (6 usbuuc ka dib), gooynta waxaa lagu beddelaa weel weyn.
Si loo dhajiyo caleemaha curonia, waa la jaraa oo la dhigaa biyaha.
Ka dib muuqaalka xididada, jirida caleen waxaa lagu beeray weel dabool leh substrate ah.
Abuurka Begonia waxaa lagu beeray Janaayo ama horraanta Febraayo. Algorithm:
Waxyaabinta Xeebeedka waa la karkariyaa Kansar dhalaalaya oo lagu meeleeyo ciidda qoyan.
Awoodda leh miraha daboolay dhalooyinka ama filim caag ah.
Ka hor inta aanu soo bixin caleemaha caleemaha lagu hayo meel diiran, oo si fiican u iftiimaya.
Wixii muraayada lagu qaado muraayada ama filimada.
Marka abuur ah Gagaashan, waxay ku riday meel qabow.
Marka caleen saddexaad u muuqdaan, geedo ku dhasho.
Si loo kala qaybiyo baadiyaha aaska, rhizome waa laga soo qaaday dheriga, laga nadiifiyo caleemo waaweyn, maydheen.
Kuurkan wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood oo leh mindi fiiqan.
Cinjiryada waxaa lagu daaweeyaa budada dhuxusha.
Waxyaabaha soo baxay ee la soo saaro waxaa la dhigayaa weel dabool leh substrate ah.
Koritaanka telonia ah telesnotsvetnoj at guriga ma noqon doonto mid fudud. Dhaqanku waa mid aan qabyo ahayn oo daryeel ah: wuxuu doorbidaa waraabin dhexdhexaad ah; dhalaalaya, si fiican looga ilaaliyo qoraxda tooska ah.